Hawaasti Oromoo Australia dirqama Ambaasaadarummaa isaa bahaataa jira
Date: December 21, 2011Author: Oromedia 0 Comments
(Oromedia, Melbourne, 21 Muddee 2011) Hawaasti Oromoo Australia magaalaa Melbourne keessa jiraatan guyyaa aadaa fi eenyummaa isaanii sirna oo’aan kabajachuun aadaa Oromoo addunyaatti beeksisan; sabqunnamtiin addaddaas ayyaana kana dinqisiifatan.
Sirna wiirtuu magaalaa Melbourne, waltajjii ‘Federeeshiin Iskuweer’ jedhamutti Muddee 18, 2011 yeroo arfaffaaf kabajamee oole irratti qaamoti hawaasaa marti akka dandeettii fi beekumsa isaaniitti hirmaatanii aada fi eenyummaa Oromoo haala ajaa’iba ta’een mul’isanii jiru.
Ayyaana kana irratti dubartooti Oromoo sirboota aadaa fi bilisummaa Oromoo leellisan kan dhiyeessan yoo ta’u, wayituma kana sirni aadaa bunaa illee waltajjii irratti dhiyaatee seenaa madda bunaa Oromiyaa waliin hidhata qabu mul’isee jira.
Ayyaana Irreechaa Oromiyaa keessatti gaggeeffamu illee fakkeessuun sirni Irreeffannaa tolchame aadaa fi eenummaan Oromoo hagam boonsaa fi miidhagaa akka ta’e hawaasa addunyaaf mul’isee jira.
Dargaggooti Oromoos gama isaaniitiin uffannaa aadaa Oromoo calaqqisuun faayamanii waan Oromiyaan qabuu fi Oromooti ta’an haalaan beeksisanii jiru.
Shamarranii fi dardarooti Oromoo kunneenis dhugaadhumatti egeree Oromiyaa ta’uu isaaniihojiidhaan mirkaneessanii jiru.
Shamarranii fi dardarooti Oromoo agarsiisa aadaa fi eenummaa Oromoo karaa sirna uffannnaan mul’isan, kana malees, bakka iyyuutti ambaasaaddara aadaa fi eenyummaa Oromoo ta’uu isaanii waan mirkaneessaniif dinqisiifannaan guddaa daaw’attoota irraa argatanii jiru.
Maanguddoon Oromoo sirna kana irratti yeroo jalqabaaf argamanis, “bagan guyyaa kana ija kiyyaan arge; kun mallattoo Bilisummaa Oromoo ti!” jedhanii jiru.
“Sabni Oromoo saba aadaa gammataa qabu, ammoo humna alagaan akka addunyaatti hin beeksifanne godhamee dha,” kan jedhan maanguddoon Oromoo kun, “sabni dhaloota gawoo fi jajjaboo guddifate yoomiyyuu garbummaan dhaalamee akka hin hafne kan mirkansuu dha,” jechuun bilisummaan Oromoo dhiiga ilmaan Oromoon akka mirknaa’u abdii guutuun dubbatanii jiru.
Agarsiisa Aadaa fi Eenyummaa Oromoo kana irratti walaloolee dargaggoota Oromoon dhiyaatan irra kan hubatames iyyannaa saba Oromoo kan ibsuu dha. Walaloolee kunneen keessattis miidhaa fi roorroo saba keenya gidirsaa jiruuf ummati Oromoo gamtaan akka awwaatu, sabni addunyaa immoo dirqama namummaa fi seeraa akka bahatu gaafatee jira.
Dursituun Waldaa Hawaasa Oromoo Australia, Aadde Toltuu Tufaa, ayyaana kana irratti dhaamsa ummataaf dabarsiteen gamtaan hojjachuun yeroon bilisummaa akka dhiyaatu godha jettee jirti.
Ayyaana kana irratti kanneen argaman yaada gabaasaa keenyaaf kennaniin, agarsiisti akkasii kun eenyummaa Oromoo addunyaatti beeeksisuun alattis miidhaa fi hiraarsaa ummata irra gahaa jiruuf sagalee ta’a jedhanii jiru.
“Saba Oromoo irraa dhalachuun kootti hedduu akkan boonu nu taasise kan jedhe, barataan biraa immoo, “yeroo mootummaan Wayyaanee ummata Oromoo biyya keessatti hiraarsaa jirutti, tokkummaaa keenyaan sagalee keenya dhageessisuun akka diinni keenya refitu, sabni keenya seexatu godha jedhee jira.
Ayyaana kana ilaalchisee gabaasaaleen maxxanfaman akka mul’isanitti, hawaasti Oromoo Australia shakkii tokko malee dirqama ambaasaaddarummaa isaa bahataa jira.
Ayyaanni aadaa Oromoo kun bara 2008 kan eegale yoo ta’u, yeroo sanii eegalee otuu walirraa hin citiin marsaa arfaffaaf haala dinqisiisaa ta’een kabajamee jira.
Previous Previous post: Addi Bilisummaa Oromoo Fakkeenyummaa Walooma Amantiilee ti!
Next Next post: Oromo people of East Africa celebrate culture in Federation Square